» XOG CUSUB: Warar sheegaya In la joojiyay Mooshinkii Saldhiga Berbera & Sababta loo joojiyay?
XOG CUSUB: Warar sheegaya In la joojiyay Mooshinkii Saldhiga Berbera & Sababta loo joojiyay?
Shaki ayaa laga qabaa halka uu ku dambeeyo mooshinkii ka dhanka ahaa Imaaraadka Carabta faragelinta ay ku haayan Soomaaliya iyo Saldhiga Ciidan ee Imaaraadka ka sameysanayan Magaalada Berbera ee Waqooyiga Soomaaliya (Somaliland).
Markii Mooshankaas Xubnaha Baarlamaanka loo qeybiyay ayaa Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya si deg deg ah ula kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, Ra’iisal Wasaaraha Xasan Cali Kheyre iyo Afhayeenka Baarlamaanka Maxamed Sh Cusmaan Jawaari.
Waxaa intaas xigtay Farmaajo oo si deg deg ah ku tagay Imaaraadka Carabta isla markaana isagoo qanacsan ku soo laabtay Muqdisho.
Madaxda Soomaalida ayaanan inta badan laga warqabin waxyaabaha ay sida hoose usameynayaan iyo go’aanada ay ka qaadanayaan hantida qaranka
Madaxweyne Farmaajo oo dadka Soomaaliyed ka haysta taageerada ugu badan kadib doorashadiisii ayaa waxaa uu haatan qeyb ka yahay shaqsiyaadka dowlada katirsan ee xalka u waayay in Imaaraadka uu joojiyo saldhiga militeri ee Berbera iyo mashruucyada kale ee Puntland.
Ra’isul Wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre ayaa dhankiisa la ogaanayaa inuu heshiisyo la galay ganacsato shidaalka ah oo ka howlgala Norway,Ingiriiska iyo kenya.
Ilo diblomaasiyadda Soomaaliya ka tirsan waxay sheegayan in Mooshinkaas barlamaanka la horgeeyay haatan laga heshiiyay oo la joojiyay.
Si kastaba, Imaaraadka ayaa dadaal ugu jira inuu saameyn militeri iyo mid dhaqaale ku yeesho Soomaaliya oo ah dal hodan ku ah shidaalka ceyriinka ah iyo kheyraad kale